Dowlada Urdun oo u aarguday Dilkii Duuliye u dhashay Dalkeeda oo Kooxda Daacish ay Nolosha ku gubeen | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Dowlada Urdun oo u aarguday Dilkii Duuliye u dhashay Dalkeeda oo Kooxda Daacish ay Nolosha ku gubeen
Dowladda Urdun waxay sheegtay in ay dhishay laba mitidiin ah oo u xirnaa, saacado kaddib markii la shaaciyey fiidiyow muujinayey duuliye reer urdun oo gacanta ugu jiray kooxda Daacish oo lagu gubayo isagoo nool shabaq ka samaysan bir oo baansiin lagu daayey, kadibna dab la qabad siiyey.
Boqolaal qof ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaala madaxda Urdan waxayna dalbanayeen in loo aaro duuliyaha oo 26 sano jir ahaa.
Duuliyaha oo la oron jiray Mucaath al-Kasasbeh ayaa waxa uu gacanta u galay kooxda daacish dhamaadkii bishii hore ee Disembar kaddib markii diyaaradii dagaalka ee uu waday ay kooxdu soo riday.
Boqorka Urdun King Abdalla ayaa khudbad toos ah oo uu jeediyey isagoo jooga Washington waxa uu duuliyaha ku tilmaamay geesi u dhintay wixii uu aaminsanaa iyo dalkiisa hooyo.
Waxa uu ku tilmaamay kooxda daacish koox aan la mid ahayn dadka kale. Waxa uu si deg deg ah u soo afjaray socdaal uu ku marayey maraykanka, waxa uuna la kulmay Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama.
Obama ayaa cambaareeyey falka kooxda, waxa uuna sheegay in tani ay sii xoojin doonto ka go’naanshaha xulufada dagaalka kula jirta kooxdan.
Waraka ayaa tilmaamaya in duuliyaha la dilay bishii tagtay balse haatan un la shaaciyey fiidiyowga.